आफू मेरेको छैन भनेर प्रमाण पेश गर्नुपर्ने कस्तो विवशता: रश्मी भट्ट » RealPati.com
आफू मेरेको छैन भनेर प्रमाण पेश गर्नुपर्ने कस्तो विवशता: रश्मी भट्ट
अस्मिता केसी । पोहोरसाल जस्तै यसवर्ष पनि लकडाउनका कारण मातातीर्तथ औँसीमा घरमा आमासँगै रहने सौभाग्य मिल्यो । हुन त सन्तानका लागि मातातीर्थ औँसी चाहिँदैन्, आमा सधैँ स्पेसल हुनुहुन्छ हाम्रोलागि तरपनि यो दिनको महत्त्वलाई म नकार्न सक्तिनँ ।
आमाले हाम्रो लागि गरेका विगतदेखी वर्तमानसम्म गरेका संघर्षहरु केलाउँदा ‘कविता’ लेख्न मन लाग्यो लेखेँ । फेसबुकमा राखेँ । केही मिडियाले त्यही कपी गरेर प्रकाशन गरेको रहेछ । सेयर गर्दै बसेँ ।
फेसबुकमा आमाका थरीथरीका अनुहार र थरीथरीका शब्द थिए आमाको लागि । चिनेका जति आमालाई कमेन्ट्मा वीस गर्दै थिए । मोबाइल स्क्रोल गरिरहँदा एक्कासि देखेको दृश्य र शब्दले स्तब्ध बनायो ।
‘शब्द’ नामको फेसबुक पेजले एउटा न्युज सेयर गरेको थियो । newsnepaldainik.com नामक अनलाइन न्युज पोर्टलमा सार्वजनिक गरिएको सो समाचारको हेडलाईन थियो,’आज आमाको मुखहेर्ने दिन, रश्मी भट्टको निधन’ । त्यसको फिचर फोटोमा कलाकार भट्टको एक म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेको तस्बिर राखिएको थियो ।
लामो समयदेखि प्रायःचलचित्रमा आमाको अभिनय गर्ने वरिष्ठ अभिनेत्री तथा कलाकार रश्मी भट्ट सबैको प्रिय कलाकार हुनुहुन्छ । मेरो झनै प्रिय कलाकार उहाँ । उसै त प्रिय कलाकार त्यसमाथि पनि आमाको मुख हेर्ने दिन मलाई खबरले एकदमै दु:खी बनायो तर म हेडलाईन मात्रैले विश्वास गर्न सकिनँ समाचार पुरौ खोलेर हेरेँ । पढ्दै जाँदा न्युजमा सत्यता भेटिनँ । एउटा म्युजिक भिडियोको अभिनयलाई बढावा दिएर तयार पारिएको सो समाचारको वास्तविकताले खुसी लाग्यो उहाँको निधन भएको रहेनछ तर समाचार सम्पादन गर्ने ‘न्युजनेपालदैनिक’ र सेयर गर्ने ‘शब्द’ नामक पेजलाई केही भन्न मन लाग्यो र कमेन्ट् गरेँ । पछि हेर्दै जाँदा उहाँको निधनको खबरबारे राखिएको समाचारले समाजिक सञ्जाल रंगिन थियो ।
कलाकार भट्टकै फेसबुक प्रोफाइलमा गएर हेरेँ । म ज्युँदै छु भन्ने प्रमाण पेशगर्न लाइभमा आउनुभएको रहेछ । झन नरमाइलो लाग्यो । कसैले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको लागि ज्युदो मान्छेपनि मरेको समाचार सम्पादन गर्छ र त्यसको प्रमाण निर्दोषले नै पेश गर्नुपर्छ । कस्तो अचम्म!
अनलाइन मिडियाहरुको संख्या बढेसँगै यस्तो विकृति पनि तीब्र गतिमा बढेको छ । भ्युजको आशमा अनेकन हेडलाईन राखेर समाचार सम्पादन गर्ने मिडियाको होडबाजी छ यसबेला । मलाई लाग्छ उचित मिडिया नीति नभएसम्म विकृतिले झनेै विकराल रुप लिन सक्नेछ ।
अत: सोही प्रसंगमा मलाई कलाकार भट्टसँग नै कुरा गर्न मन लाग्यो । उहाँसँगको कुराकानीमा उहाँले भन्नुभयो ,’ खबरले एकदमै स्तब्ध बनायो , म मरेको छैन् भनेर दर्शक समक्ष प्रस्तुत हुँदा झन नरमाइलो लाग्यो । कलाकार संघ र प्रेश काउन्सिलमा उजुरी गरेकी छु । न्याय पाउने आशामा छु । यसकै आधारमा साइबरमा पनि रिपोर्ट गर्ने छु ।’
दर्शक र पाठक भन्दा ज्यादा भएका यी मिडियाको कारण बेला बेलामा आउने यस्ता अवास्तविक र अमर्यादित समाचारले हरेक क्षेत्रमा परिरहेको असरबारे सम्बन्धि सबैको ध्यान जाओस् । धन्यवाद !
भ्वाइस अफ नेपालका जज सनुप पौडेलको मनछुने ‘न भुल्ने सक्ने’ गीत सार्वजनिक
सगरमाथाको चुचुरोमा नपुगी दुई भारतीयले लिए प्रमाणपत्र
पाँच दिन बित्दा पनि अध्यादेश फिर्ता भएन, स्थायी समितिमा यो पनि मुख्य एजेण्डा
सुन्दरीले डेटिङमा बोलाएपछि खुसी हुँदै गए, युवतीलाई देख्नासाथ उड्यो होस्